Eriri Laser Ịcha Machine, CO2 Laser Cutting Machine, Laser Cutting Machine - G.Weike
3D Laser Ịcha ígwè ọrụ
Efere laser ọnwụ igwe
CO2 Laser Cutting na-akanye
CNC rawụta / Vibratory Knife Machine
na-guzobere na July 2004, nwere ihe karịrị 500 square mita nke na-eme nnyocha na ọfịs, ihe karịrị 26000 square mita factory.All igwe gafere European Union OA Nyocha, American FDA akwụkwọ na na-gbaara ka ISO 9001. Products na-ere ka USA, Canada, Australia, Europe, South ọwụwa anyanwụ Asia, Africa etc, ihe karịrị 100 mba na ebe, na ọkọnọ OEM ọrụ n'ihi na ihe karịrị 30 manufactures.
Anyị ga-eziga anyị engineer na ahịa 'ebe aka wụnye, nwalee igwe, na-azụ ahịa' technicians, anyị engineer ga-anọ na ahịa 'ebe 5-7 ụbọchị, ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ndị njem okirikiri ikuku tiketi / hotels / nri ụgwọ maka anyị engineer.
Anyị mmadụ mkpa ka anyị na oru nkwado na ha show, anyị engineer ga-aga gị show na-arụ ọrụ ọnụ, ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ndị njem okirikiri ikuku tiketi / hotels / nri ụgwọ maka anyị engineer.
24hours online ọrụ The ahịa 'technicians nwere ike na-na-eleta anyị engineer n'oge ọ bụla, site WeChat / whatsapp / mobile ekwentị ma ọ bụ email, anyị engineer ga-enyere dozie nsogbu gị ka anya dị ka o kwere omume.
LF1325L Fiber Laser Ịcha Machine
LF3015L Fiber Laser Ịcha Machine
LF3015C Industrial Fiber Laser Ịcha Machine
LF3015G Full Protection & Ugboro abụọ Isiokwu Las ...
LF0640 nkenke Fiber Laser Ịcha Machine
LF1390 nkenke Fiber Laser Ịcha Machine
Ahịa gbakwasara, anyị na e n'inye àgwà ọrụ maka ndị ahịa na ndị ọzọ ná mba 90 na ebe n'ụwa nile.
OTÚ IT na-arụ ọrụ?
The kasị authentic ọnwụ picture, ka ị mara otú anyị na igwe na-arụ ọrụ, ekwe ka ị na-nso GWEIKE amara nke eriri laser ọnwụ igwe.
The 25 Shanghai Int'l Ad & Banye Technology & Equipment ngosi
The 20 Qingdao International Machine Tools ngosi
March 8th -11th, 4 ụbọchị nke 25th Shanghai Int 'Ad & Banye Technology & Equipment Ngosi nke seccessfully kwubiri. The mgbasa ozi na ngosi bụ ndị kasị ibu n'ụwa Ad ...
Eriri laser ọnwụ igwe, akpaka anwụrụ eriri laser ọnwụ Machine na 3D eriri laser ịcha robot dọtara a ọnụ ọgụgụ buru ibu ndị si n'ụlọ na mba ọzọ. ghọọ ihe ndị kasị PO ...